Search Engine Optimization အကြောင်းမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများအတွက် Semalt အဖြေများ
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်၌သံသယများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အတော်အတန်မသိသောပြproblemနာဖြစ်ပြီးလူတိုင်းတွင်မှန်ကန်တဲ့အဖြေပေးရန်“ မှော်အတတ်” မရှိပါ။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ခင်ဗျားတို့အနားမှာရှိတယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုရန်ဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ဤမေးခွန်းများသည်သင်၏စိတ်ထဲတွင်ရှိနေပြီးသင်ဘယ်တော့မျှမမေးရဲပါ။ “ သိခြင်းသည်စွမ်းအား” ဟူသောစကားစုသည် SEO ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သိလေလေ၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်လေ (ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖောက်သည်များပိုမိုများပြားလာခြင်း) ကိုပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ဒါမကောင်းဘူးမဟုတ်လား ဒါကြောင့်ဘုံ SEO ကိစ္စရပ်များသို့လေ့လာကြပါစို့။
SEO ဆိုသည်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတိုကောက်ဝေါဟာရသည် search engine optimization technique ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (ဂူဂဲလ်) တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားရရှိရန်နှင့်အသုံးပြုသူများအလွယ်တကူရှာဖွေရန်သင်လုပ်နိုင်သည်။
SEO သည်သင်၏စာမျက်နှာများသို့ SEO ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖော်ပြချက်များထည့်သွင်းခြင်း၊ သင်၏ပုံများကိုအခြားစာသားများထည့်ခြင်း၊ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းများ၊ ဘလော့ဂ်ဖန်တီးခြင်းစသည့်အဆင့်များနှင့်နည်းစနစ်များစွာကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
SEO နှင့် SEM သည်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
SEO နှင့် SEM (ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်တိုတို) သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဝဘ်စာမျက်နှာများ၏မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဓိကခြားနားချက်မှာ SEM တွင်ငွေပေးချေမှုမြှင့်တင်ရေးနည်းပညာပါ ၀ င်ပြီး SEO တွင်မူမပါဝင်ပါ။
ဒါအမှန်တရားပဲ။ ငါတို့အားလုံးကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကိုသုံးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီဘလော့ဂ်ကိုဖတ်သည့်အချိန်တွင်ဂူဂဲလ်တွင်ရှာဖွေမှုပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဒေသအပူချိန်ကိုနားလည်ခြင်းမှအနီးဆုံးပီဇာဆီရှာခြင်းအထိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကသင်၏သို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရှာဖွေပုံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းရှာဖွေရေးနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ သစ်တောရှိလူသိများသောသစ်ပင်အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အွန်လိုင်းဖြစ်ပြီးမည်သူမျှမရှာနိုင်ပါက၎င်းတည်ရှိသလား။
ထိပ္ဖ်ား: သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သည်အကျပ်အတည်းတွင်မရှိကြောင်းသေချာစေပြီးသင်၏ SEO ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဒုတိယအဆင့်တွင်ခြေရာခံစာမျက်နှာများသည်ဒေတာဘေ့စ်ကြီးတစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒါကို "index" လို့ခေါ်တယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်ရှာဖွေရေးအကွက်ထဲတွင်ရှာဖွေမှုတစ်ခုကိုထည့်ပါကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ဒေတာဘေ့စ်ကိုဆွေးနွေးပြီးထိုရှာဖွေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
ဤသည်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှု ဝက်ဘ်ဆိုက် semalt.com။
ငါတို့အတွက်၊ အကြွေးတင်စရာမလိုဘဲရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုရနိုင်သည်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်စျေးကြီးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်းစရာမလိုခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ SEO ကိုစိတ်ပူပြီးမလိုအပ်ဘဲမဖြုန်းချင်ပါကသင်လှည့်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO ကျွမ်းကျင်သူများ။ လိုအပ်သောတစ်ခုတည်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာသင်၏အချိန်၊ စိတ်ရှည်မှုနှင့်အားထုတ်မှုဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုယုံပါ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာကြီးမားလိမ့်မည်။
လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ သင်သည်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုမသိဘဲဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုယခုဖန်တီးနိုင်သည်။ အမှန်မှာ HTML ၏အခြေခံကိုသိခြင်းက ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သို့သော်သင်က Google တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားကိုရလိုလျှင်၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်စရာမလိုတော့ပေ။
ဒေသဆိုင်ရာ SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ဤအယူအဆသည်သင်၏နယ်မြေအတွင်းရှိတစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေသည့်အခါရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုများကိုအများဆုံးပြုလုပ်သည့်နည်းလမ်းပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏areaရိယာရှိအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များထဲမှတစ်ခုမှာဂူဂဲလ် My Business ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းလမ်းညွှန်များတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကို Google Maps တွင်ပြသရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် "Package 3" (ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်မြေပုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရလဒ်သုံးခု) တွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက - သင် search engine တွင်တည်နေရာတစ်ခုကို upload လုပ်လိုပါက scan ဖတ်ရန်နှင့် index လုပ်ရန်သေချာအောင်လုပ်ရမည်။ သင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ -
သင်၏စာမျက်နှာများကိုအတည်ပြုရန် Google Search Console (GSC) ကိုသုံးပါ
Google Search Console (ယခင်က Google Webmaster Tools များဟုလူသိများ) သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက် Google မှအခမဲ့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးရန် GSC ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကြံပြုထားသည့် SEO လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူပြီးသင်သည်စာမျက်နှာ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဂူဂဲလ်အားခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးခလုတ်ခုံမှသင့်အားသင်၏စာမျက်နှာများနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဖော်ပြချက်များ၊ ကလစ်နှိပ်မှုအရေအတွက်နှင့်အချို့သောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါက၊ သင့်ကိုနားလည်စေရန်ကူညီရန်အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
ဆိုက်မြေပုံသည်၎င်း၏မြေပုံသာဖြစ်သည်။ သင်၏ကွဲပြားခြားနားသောစာမျက်နှာများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမည်သို့ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုပြသည်။ မြေပုံများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသို့ပေးပို့ခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာမြန်ဆန်စွာခြေရာခံနိုင်ပြီးသင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား? ပိုမိုရှာဖွေပါ semalt.com ။
သင်၏ဆိုဒ်ကိုအညွှန်းကိန်းဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းမှာ "သင်၏ဆိုဒ်" ကိုဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးနေရာတွင်ရိုက်ပြီးတစ်ခုခုပေါ်လာသလားဆိုတာကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏စာမျက်နှာသည်ရလဒ်များတွင်ပေါ်လာပါကသင်၏စာမျက်နှာကိုရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်များကိုသင်ချက်ချင်းမတွေ့ပါက၊ မထိတ်လန့်ပါနှင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် indexing လုပ်ငန်းစဉ်သည်အချိန်ကြာနိုင်သည်။
အရေးကြီးမှတ်စု အညွှန်းကိန်း optimization နှင့်အတူပြောရလျှင်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာကိုဂူဂဲလ်မှရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပထမစာမျက်နှာတွင်ပေါ်လာမည်မဟုတ်။ သင်၏ optimization အားထုတ်မှုသည် SEO ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ် SEO ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်သိလိုစိတ်တို့ဖြင့်စတင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းအရာမှဒီဇိုင်းအထိဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ရှုထောင့်တိုင်းသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်၏အဆင့်ကိုသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်သိထားရမည်။
ဝဘ်စာမျက်နှာခွဲခြားခြင်း၏ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဂူဂဲလ်၏ algorithm တွင်ညွှန်ကိန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကောင်းမွန်စွာရေးသားပြီးအရည်အသွေးကောင်းပါသလား။ မှန်ကန်တဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေကိုရွေးခဲ့သလား။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုလက်ကိုင်ဖုန်းများ၌အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။ ဤအရာများသည်စက်ရုပ်များ (ဂူဂဲလ်စက်ရုပ်များ) ကသင်၏အကြောင်းအရာကိုရိပ်မိပုံနှင့်သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုခွဲခြားပုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်လိုပါကအကြောင်းအရာကိုကိုင်တွယ်ခြင်းသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆက်ဖတ်လျှင်၊ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ရှာလိမ့်မည်။
SEO နှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိလင့်ခ်များသည်အခြားသူများ၏ထောက်ခံချက်နှင့်တူပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ ဤ link များရယူခြင်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုဖြစ်စေလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
ခြေရာခံစွမ်းရည်များ၊ On-page SEO (on-page) နှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အခြားအရာများထဲမှတစ်ခုတွင်၊ Meta ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖော်ပြချက်များ၊ သင့်ဆိုဒ်အားလုံခြုံမှုရှိပါကပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ခေါင်းစဉ်၏အကူအညီဖြင့်သင်၏စာမျက်နှာကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ထိရောက်သောနှင့် SEO ဆိုသည်မှာ tools တွေကိုစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအရေးကြီးသောခြေလှမ်းများကိုမေ့သွားနိုင်မည်ဟုသေချာစေရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုပေးသည်။
အရေးကြီးသော SEO ဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုမည်သို့နားလည်မည်နည်း။
Semalt ဘလော့ဂ်ကိုလိုက်နာပါ။ သင်၏ SEO မေးခွန်းများအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်ပြည့်စုံပြီးဖော်ရွေသောလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ထုတ်ဝေပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောနေ့စဉ်သတင်းများကိုခြေရာခံရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားပါကသင်တိုင်ပင်နိုင်သည် semalt.com ။
သင့်ရဲ့ content မှာမှန်ကန်သောစကားလုံးများကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ page ၏ content ကိုပိုမိုနားလည်စေရန် Google robots များကိုကူညီရန်နှင့်၎င်းကိုရှာဖွေမှုတစ်ခုအတွက်သင့်လျော်သောရလဒ်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ on ည့်သည်များသို့မဟုတ်အနာဂတ်ဖောက်သည်များကသင့်အားအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာရန်အသုံးပြုသောဖြစ်နိုင်သမျှသောစကားလုံးများကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့ဖော်ပြမည်ကိုမစဉ်းစားပါ၊ သို့သော်အွန်လိုင်းတွင်လူအများရှာဖွေနေသောအရာများကိုမစဉ်းစားပါနှင့်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဥယျာဉ်မှူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သော်လည်းသင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်ဥယျာဉ်မှူးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သိပါလား? ကျွန်ုပ်တို့သည်အစပြုသူများကိုaပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် ဘယ်လို သူတို့ရဲ့ဝဘ်ဆိုက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာပါ။
SEO အတွက်စာသားကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။ အဘယ်အရာကို "အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာ" ဟုခေါ်သည်?
သင့်တွင်သော့ချက်စာလုံးများရှိပြီးသားဖြစ်ပါကသင်ထည့်သွင်းရမည့်အဓိကနေရာများမှာခေါင်းစဉ်၊ သင်၏ URL၊ စာမျက်နှာအကြောင်းအရာ၊ ဘလော့ဂ်မှဓာတ်ပုံများ (ဖြစ်နိုင်လျှင်) နှင့်အလုပ်ဖော်ပြချက်ကို SEO ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
စာသား၏အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများကိုကြည့်သည်။ ကောင်းမွန်စွာအဆင့်သတ်မှတ်ရန်သင်၏အကြောင်းအရာသည် -
တန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်များကြွယ် ၀ စွာ၊ စာဖတ်သူများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
ထူးခြားချက် - ဒီအချက်အလက်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မရဘူး၊
ယေဘုယျအားဖြင့်ဘလော့ဂ်ဖန်တီးခြင်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အသုံးဝင်သော၊ ထူးခြား။ မွမ်းမံထားသောအကြောင်းအရာများကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပုံများ SEO ဆိုသည်မှာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား
ရိုးရှင်းသောအဖြေမှာဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ပုံများကိုအပြည့်အဝအပြည့်အဝကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Google Image Search တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများသည်အသွားအလာပိုမိုရရှိနိုင်သည်။ မင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ
ပထမ ဦး စွာပုံသို့အခြားစာသားများထည့်ရန်သေချာစေသင့်သည်။ ဂူဂဲလ်နှင့်အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသောရုပ်ပုံများကို "မမြင်နိုင်" ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဓာတ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အခြားရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုပ်များတွင်ကူညီရန်စာသားတစ်ခုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
သတိရပါ၊ ဓာတ်ပုံတစ်ခုစီအတွက်ထူးခြား။ ဖော်ပြရန်ရွေးချယ်နိုင်သောစာသားထည့်ရန်အရေးကြီးသည်။
UX (အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ) နှင့် SEO သည်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။
သုံးစွဲသူတွေသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုခံစားရသလဲ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏လူသိများ signal ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်တွက်ချက်သည် - အသုံးပြုသူသည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိနေသည့်အချိန်၊ ပြသထားသောစာမျက်နှာအရေအတွက်နှင့်တုံပြန်မှုရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ blog post တွင်သော့ချက်စာလုံးမည်မျှထည့်ရမည်နည်း။
သင်၏အကြောင်းအရာသို့သော့ချက်စာလုံးများထည့်ခြင်းသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်အပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကျွမ်းကျင်သောပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဘဝ၌ကောင်းသောအရာများကဲ့သို့ပင်ဤနေရာတွင်သော့ချက်သည်ဟန်ချက်ညီသည်။ စာမူခေါင်းစဉ်များနှင့်ဆောင်းပါး၏ပထမစာပိုဒ်တွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်၊ ကျန်ဆောင်းပါး၏အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်ဖော်ပြရမည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ဆောင်းပါးတပုဒ်အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါ၊ သော့ချက်စာလုံးများကိုသင့်စာသားထဲမှာနေရာချရန်မလိုဘဲအလွယ်တကူဖော်ပြလိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ စာသားသည်ထပ်ခါတလဲလဲပြောနေသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ သင်သည်အဓိပ္ပါယ်တူချက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်အချို့သောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးများကိုနားလည်ရန်ပိုကောင်းလာသည်။ ထို့ကြောင့်သော့ချက်စာလုံးအနည်းငယ်ကိုသာကန့်သတ်ရန်မလိုပါ။
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်စံပြစကားလုံးအရေအတွက်ကိုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလေ့လာမှုတော်တော်များများက "ရှည်လျားသော" အကြောင်းအရာသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ယေဘူယျစည်းမျဉ်းမဟုတ်ကြောင်းသိထားလျှင်သင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်စျေးကွက်၏စံနှုန်းများကို ဦး စွာစဉ်းစားရမည်။ အရှည်တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးသောအရာမဟုတ်ပါ။ တန်ဖိုးရှိသောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအပါအ ၀ င်သင်၏အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေး၊ စာဖတ်သူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ကတိက ၀ တ်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်သင်၏အကောင်းဆုံးနေရာကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။
အဓိကအချက်မှာသင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်အားသင်၏အကြောင်းအရာကိုပျော်ရွှင်စွာအချိန်ဖြုန်းရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအားလုံးသည်သင်၏ SEO အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်လိမ့်မည်။
ဘလော့ဂ်တစ်ခုကသင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆလတ်ကဲ့သို့လတ်ဆတ်ရန်အမြဲကူညီပေးသည်။ သင်ပိုများလေအကြောင်းအရာများလေ၊ ဂူဂဲလ်ဘော့များပိုမိုရှာဖွေလေလေဖြစ်သည်။ အမှန်မှာနေ့စဉ်စာပို့ရန်မလိုပါ၊ သို့သော်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်ကိုက်ညီသောစည်းချက်ကိုရှာရန်ကြိုးစားပါ။ အနိမ့်ဆုံးသည်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် SEO ကိုအမှန်တကယ်ကျူးလွန်ပါကသင်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်မကပိုတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
SEO ဆိုသည်မှာ backlinks ကဘာတွေလဲ။
ဤရွေ့ကားပြင်ပစာမျက်နှာများမှသင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ (သို့မဟုတ်သင့်စာမျက်နှာများမှ) လင့်ခ်များဖြစ်သည်။ backlink များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးမဟာဗျူဟာ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင် link များများများများရလေ၊ သင်၏ site ကို search engine များက ပို၍ အရေးကြီးလေဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ်၏အမြင်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်ရှုမြင်လိမ့်မည်။
Backlinks ရရှိရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ သို့သော်သင်ဘလော့ဂ်များ၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်ဆက်စပ်သောအွန်လိုင်းစာပေများကို ဦး စွာဆက်သွယ်ပြီး၎င်းအကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့မြှင့်တင်ရေးအောင်မြင်ရန်ဒီထုတ်ဝေမှုကိုလေ့လာပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြံပြုချက်များကိုဖတ်ရှုပါ။
ဂူးဂဲလ်၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုအမြဲလိုက်နာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာသတိရပါ၊ SEO အစီအစဉ်၏ဆိုးကျိုးများဟုယူဆရသော "link scheme" ဟုမခေါ်ပါနှင့်။
သင် Google Webmaster လမ်းညွှန်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ Semalt website။
လူမှုကွန်ယက်များက SEO အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။
ဒါကရှည်လျားသောဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ လူတွေကများများသင့်အကြောင်းအရာကိုရောက်လေလေ၊ အွန်လိုင်းဝေမျှချင်လေပဲ။ ဤသည်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ သင်၏ SEO အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းအမည်သည် SEO ကိုထိခိုက်မည်လား။
ဟုတ်ပါတယ်။ သင်၏ domain name သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစက်ရုပ်များနားလည်သောပထမဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးသည်မည်သည့်သော့ချက်ဖြစ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ဒိုမိန်းအမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီကြိုတင်လေ့လာခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ကောင်းသည်။
သင်နောက်ထပ်အကူအညီလိုပါသလား ဤတွင်အချို့အရေးကြီးသောအကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည် သင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအတွက်မှန်ကန်သောဒိုမိန်းအမည်ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်။
Meta tags ဆိုတာဘာလဲ။
Meta Meta (Tag များ) အကြောင်းပြောသောအခါသင်၏ Meta title သို့မဟုတ် SEO ခေါင်းစဉ်နှင့်သင်၏ Meta ဖော်ပြချက်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ကိုးကားသည်။ သင်၏ URL ဘေးတွင်ဤအပိုင်းများသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဖော်ပြထားသောအတိုအထွာကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ဤစာသား၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဂရုပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စက်ရုပ်သည်သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာ၏အကြောင်းအရာကိုနားလည်ရန်၎င်းကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။
ခေါင်းစဉ် tag ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်ငါလိုတာလဲ
ခေါင်းစဉ် tag (H1 မှ H6 အထိ) သည်ခေါင်းစဉ်နှင့် "SEO အသုံးအနှုန်း" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သတင်းစာတစ်ပုဒ်တွင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဓိကခေါင်းစဉ်သည်ဆောင်းပါး၏အရေးအကြီးဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးအခြားခေါင်းစီးများသည်အလွန်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ H1 tags များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အသုံးပြုသင့်သည်၊ H2 tags များကိုအဆင့်နိမ့်သတင်းအချက်အလက်အတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။
ခေါင်းစဉ်အညွှန်းတစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၎င်းသည်စာမျက်နှာသို့လာရောက်လည်ပတ်သူလား၊ ဂူဂဲလ်ဘရောက်ဇာဖြစ်စေသင်ဖတ်ရှုရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိသော redirect 301 သည် traffic တစ်ခု၏စာမျက်နှာတစ်ခုသို့အခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က Google လိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကိုပြောလိမ့်မယ်။ စာမျက်နှာရဲ့ URL (URL) ကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စက်ရုပ်ကဘာရည်မှန်းချက်အသစ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
၎င်းသည်ယခင်စာမျက်နှာရရှိထားသည့် SEO စွမ်းအားကိုထိန်းသိမ်းရန်စာမျက်နှာအသစ်ကိုကူညီသည်။ ဂူဂဲလ်အမှန်တကယ်မနှစ်သက်သောနှင့်ထပ်မံအပြစ်ပေးသည့်အကြောင်းအရာများထပ်မံကူးယူခြင်းပြavoidနာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်လိုအပ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကသင်၏စာမျက်နှာကိုပြသရန်အချိန်ကြာသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အသစ်ဖြစ်သည်။ သင်၏စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုနှင့်သော့ချက်စာလုံးများ၊ သင်ထုတ်ဝေသည့်အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးနှင့်လတ်ဆတ်မှုနှင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းစသည့်အချက်များများစွာအပေါ်မူတည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတိအကျကို ပြော၍ မရပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်ရလဒ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားထားခြင်းသည်တစ်ညတည်းဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်နားလည်ရမည်။ သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပြောင်းလဲမှုများအားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် Google ၏စက်ရုပ်များကိုအချိန်ပေးရမည်။ ထို့အပြင် SEO သည်ပြိုင်ပွဲတိုပြိုင်ပွဲထက်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုကောင်းမွန်သောတည်နေရာကိုရရှိနိုင်ရန်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပုံမှန်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးများရှိရန်ပုံမှန်မွမ်းမံရမည်။
အော်ဂဲနစ်လုပ်ငန်းကိုတိုင်းတာရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာဂူဂဲလ်၏ကိရိယာများကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ် Analytics နှင့် Google Search Console သည်သင့်အားအွန်လိုင်းစာမျက်နှာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်သည့်ထပ်ဆင့်အချက်အလက်များကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
Google Search Console တွင် "Search Traffic" ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးတော့ "Search Analysis" ကိုအဓိကရှာဖွေခြင်းနှင့် Google ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပေးသောပင်မစာမျက်နှာကိုရှာရန်။
Google Analytics တွင်၊ "Acquisition" အပိုင်းသို့ သွား၍ သင့်ဝဘ်ဆိုက်သို့အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုကြည့်ရန် "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါပြီးနောက်သင်ဇယားမြင်လိမ့်မည်။ သင်သည်ဒေတာများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီးအော်ဂဲနစ်အသွားအလာပြောင်းလဲမှုများကိုတိကျသောအချိန်ကာလတစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်၎င်းကိုယခင်အချိန်ကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သင် Google Analytics သုံးစွဲနည်းကိုမသေချာပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားလမ်းညွှန်တစ်ခုပေးပါမည်။